Mayelana NATHI - Beijing IWHR Corporation (BIC)
Ububanzi bebhizinisi ikakhulu buhlanganisa:
I-BICisebenza kakhulu ekucwaningeni emkhakheni wezobuchwepheshe ohlobene njengaphesheya kwezilwandle kanye nemithombo yamanzi kazwelonke namandla kagesi, ukuxhumana, amandla, ujantshi, ubunjiniyela bakamasipala, ukwakhiwa njll .; Ukuphenya nobunjiniyela bezobunjiniyela, ukwakhiwa, ukwengamela, ukubonisana nokuhlola, ukuqapha nokuhlola, i-EPC; ucwaningo nentuthuko, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwezinto ezintsha zobunjiniyela, imishini yokuqapha kanye nohlelo olusekelwe olwazini, imishini yokwelashwa kwamanzi, kanye nemishini ye-electro-mechanical; ezisebenza futhi eziyinxusa lebhizinisi lokungenisa nokuthekelisa lazo zonke izinhlobo zezimpahla nobuchwepheshe.
Nikeza ngomklami ongumxhumanisi, isethi ephelele, inkontileka yokufaka imishini kanye nensizakalo yokuthengisa emva kokuthengiswa kwamaphrojekthi wobunjiniyela bamanzi amancane naphakathi nendawo; Ukwakhiwa, ukukhiqizwa nokufakwa kwamadamu enjoloba, amadamu e-hydraulic elevator;
I-BIC ingumhlinzeki ohamba phambili wemishini yokwelashwa kwamanzi nokwakhiwa eChina futhi inethimba eliqeqeshiwe labadwebi, onjiniyela nabasebenzi bokuphatha. Siphinde futhi sihlinzeke ngokubonisana kwezobuchwepheshe kanye nokusebenza kumaphrojekthi we-Engineering, Procurement and Construction (EPC) kulezi zindawo ezilandelayo: ukuhlanzwa kwamanzi angcolile (ETP), ukuphathwa kwamanzi angcolile ezimbonini (amanzi angcolile, ukusika nokuphrinta nokudaya amanzi angcolile, amanzi angcolile wamaphepha okusila, namanzi angcolile wamanzi amakhemikhali) , amaphrojekthi wokuphakelwa kwamanzi kanye nokwelashwa kwezinhlobo zamanzi ezikhethekile (amanzi e-arsenic, amanzi ane-fluorinated, amanzi e-forum- manganese kanye namanzi anama-brackish) .Emva kweminyaka eminingi yocwaningo, i-BIC isungule uchungechunge lwemikhiqizo ehlobene nokwelashwa kwamanzi okubandakanya: i-Ultra Filtration (UF ), Reverse Osmosis (RO), ulwelwesi Bioreactor (MBR), Ukuncibilikiswa Kwamanzi Olwandle, Ukususwa Kukawoyela kanye Nezitshalo Zokuhlanzwa Kwamanzi, kanye nePompo Yokugibela Imoto Ephuthumayo. Le mikhiqizo inguquko futhi ingatholakala ngemali ephansi.
Ukungenisa Nokuthekelisa Kwangaphandle
Phatha ukungeniswa nokuthunyelwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zempahla ehambisana nezinqubomgomo zombuso ngokuzimela noma njenge-ejenti;